နို့တိုက်သတ္တဝါမျိုးစိတ် (အကြီးဆုံး ကြောင်မျိုးရင်းဝင်)
ဘင်္ဂလားကျား တစ်ကောင် (P. tigris tigris)
မျိုးစိတ် P. tigris
Panthera tigris၊ Linnaeus, 1758
ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ကျားများ ကျက်စားရာ နေရာပြ မြေပုံ( အနီရင့်ရောင်သည် ကျားအများဆုံးကျက်စားရာ ဖြစ်သည်။)
ကျားသည် တောက်ပြောင်လှပသော အသွေးအမွေး၊ အချိုးအစားကျနပြေပြစ်သော ကိုယ်လုံးကိုယ်ထည်၊ ဖျတ်လတ်ပေါ့ပါးသော ကိုယ်ဟန်တို့ကြောင့်၊ ကြောင်မျိုးဝင် တိရိစ္ဆာန်အပေါင်းတို့တွင် အလှပဆုံးနှင့် အချိုးအကျဆုံးဖြစ်သည်။ အာရှတိုက်တစ်ခွင်လုံးတွင် ကျားအမျိုးမျိုး ရှိသည့်အနက် ဘင်္ဂလားကျားမျိုးမှာ လူသိအများဆုံးဖြစ်သည်။ အခြားအတော်အသင့် လူသိများသော ကျားမျိုးတို့မှာ မန်ချူးရီးယားကျား၊ ကော်ကေးရှားကျားနှင့် ပသျှူးကျားမျိုးတို့ ဖြစ်သည်။ လူသိအများဆုံး ဘင်္ဂလားကျား၏အသွေးအမွေးမှာ အခြားကျားများနှင့် မတူ၊ နီဝါဝါအရောင် ရှိပြီးလျှင် တစ်ကိုယ်လုံးတွင် အနက်ရောင် အစင်းကြီးများဖြင့် လှပစွာရှိသည်။ ကျားကို သဘာဝက ဤကဲ့သို့ မြေကြီးနှင့် ခွဲမရအောင် ရောင်စုံခြယ်၍ ပေးထားသောကြောင့် တောချုံ ပိတ်ပေါင်းများအကြား သို့မဟုတ် မြက်ရှည်တောကြီးများ၏ အလယ်တွင် ရှိနေလျှင်၊ ကျားမှန်း ရုတ်တရက် ခွဲခြားသိရှိနိုင်ရန် ခဲယဉ်းသည်။
ကြောင်မျိုးတွင် ပါဝင်သော တိရစ္ဆာန်များမှာရေနှင့် များစွာမနီးစပ်ကြချေ။ သို့သော် ကျားမှာ ဤသို့မဟုတ်ဘဲ တစ်မျိုးတစ်ဖုံ ထူး နေသည်ကို တွေ့ရသည်။ ကျားသည် ရေကူး ကျင်လည်၏။ ထိုမျှသာမက အလွန့်အလွန်အခက်အခဲ အကျဉ်းအကျပ်နှင့်တွေ့သည့်အခါများတွင် သစ်ပင်ကိုပင် တက်နိုင်သေးသည်။ ကြောင်ကဲ့သို့ ညည့်အချိန်တွင် ပို၍ မျက်စိစူးသဖြင့် နေ့အချိန်တွင် သားကောင်လိုက်လေ့ မရှိဘဲ ညအခါမှသာ လှည့်လည်ကျက်စားလေ့ရှိသည်။ အစာရှာထွက်သည့်အခါတွင် အမဲကောင်ကို မှောင်ခိုပုန်းလျိုး၍ အုပ်ဖမ်းသတ်ဖြတ်စားသောက်တတ်သည်။ သားကောင်လိုက်ရာတွင် အလွန်ပင် ရဲစွမ်းသတ္တိရှိ၍ မည်သည့် သတ္တဝါမျိုးကိုမဆို အယဉ် အရိုင်းမရွေး တွေ့မရှောင် ကိုက်သတ်လေ့ရှိသည်။
၅ မြန်မာနိုင်ငံမှ ကျားကောင်ရေ
မျိုးပွားခြင်း နှင့် မျိုးစပ်ခြင်းပြင်ဆင်
ကျားအမသည် တစ်ကြိမ်လျှင် ၂ ကောင်မှ ၅ ကောင်အထိ သားပေါက်တတ်၏။ မွေးဖွားပြီးစတွင် ကျားကလေးသည် မိခင်ကျားမကြီးနှင့် အချိန်အတန် ကြာသည့်တိုင်အောင် အတူတကွ နေထိုင်လေ့ရှိ၏။ အသက်သုံးနှစ်အရွယ်ခန့်တွင် သားကောင်လိုက်ပုံလိုက်နည်းကို မိခင်ကျားမကြီးက သေချာစွာ သင်ကြားပြသပေးသည်။ ထို့နောက်မှ မိမိဘာသာအလျောက် တစ်သီးတစ်ခြားသားကောင် လိုက်ထွက်နိုင်သည်။ တိရစ္ဆာန်ရုံများတွင် ယခုအခါ [[ခြင်္သေ့နှင့် ကျားကို အတူတကွ မျိုးစပ်ပေါက်ဖွားစေနိုင်သည်ကို တွေ့ရ၏။ဖခင်က ကျား၊ မိခင်ကခြင်္သေ့မဖြစ်လျှင် ကျားခြင်္သေ့ဟု ခေါ်၍ မိခင်ကကျားမ၊ ဖခင်က ခြင်္သေ့ဖြစ်လျှင် ခြင်္သေ့ကျားဟုခေါ်ကြလေသည်။
၂၀၁၀ခုနှစ်သည် တရုတ်ရိုးရာပြက္ခဒိန်အရ ကျားနှစ်ဖြစ်ပြီး သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် တောရိုင်းတိရစ္ဆာန် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေး ပညာရှင်များ၏ ကွင်းဆင်းလေ့လာထားသော စစ်တမ်းများအရ ကမ္ဘာတစ်ဝန်းလုံးတွင် ကျားမျိုးကောင်ရေ (၃၆၀၀)ခန့်သာကျန်ရှိတော့သဖြင့် မျိုးသုဉ်းပျောက်ကွယ်နိုင်သည့်အန္တရာယ်နှင့် ရင်ဆိုင်နေရသည်။ ပညာရှင်တို့၏ မှတ်တမ်းများအရ လွန်ခဲ့သော နှစ်(၁၀၀)ခန့်က ကမ္ဘာပေါ်တွင် ကျားကောင်ရေစုစုပေါင်း တစ်သိန်းခန့်ရှိခဲ့ပြီး နှစ်တစ်ရာကာလအတွင်း ဤမျှအထိလျော့ကျသွားခြင်းဖြစ်သည်။ ရုရှား ဝန်ကြီးချုပ် ဗလာဒီမီယာပူတင်နှင့် ကမ္ဘာ့ဘဏ်ဥက္ကဋ္ဌ မစ္စတာ ရောဘတ်ဇိုးလစ် (Robert Zoellick) တို့၏ ဦးဆောင်စီစဉ်မှုဖြင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကျားမျိုးထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေး ဖိုရမ်ကို ၂၀၁၀ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ (၂၁)ရက်နေ့တွင် ရုရှားနိုင်ငံ၊ စိန့်ပီတာစဘာ့တ်မြို့တွင် ကျင်းပရန်ရှိသည်။ ကျားကောင်ရေလက်ကျန်ရှိနေသေးသော နိုင်ငံများဖြစ်ကြသည့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်၊ ဘူတန်၊ တရုတ်၊ အိန္ဒိယ၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ ကမ္ဘောဒီးယား၊ လာအို၊ မြန်မာ၊ မလေးရှား၊ နီပေါ၊ ထိုင်း၊ ဗီယက်နမ် စုစုပေါင်း (၁၃)နိုင်ငံမှ ခေါင်းဆောင်များ တက်ရောက်ဆွေးနွေးကြမည်ဖြစ်သည်။ ပညာရှင်များ၏ ခန့်မှန်းချက်အရ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခြင်းမပြုပဲ ယခုအတိုင်းသာ ထားလိုက်ပါက လာမည့်နှစ်တွင် ကျားကောင်ရေ ၂၀၂၂ကောင်ခန့် ထပ်မံကွယ်ပျောက်နိုင်ကြောင်း ထောက်ပြထားကြသည်။ ရုရှားနိုင်ငံတွင် ဆိုက်ဘေးရီးယားကျားမျိုး ကောင်ရေ (၄၀၀)ခန့် ကျန်ရှိနေသေးပြီး၊ မြန်မာနိုင်ငံတွင်လည်း ကျားကောင်ရေ (၁၅၀)ကျော် ကျန်ရှိသေးကြောင်း သိရသည်။ တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ ( World Wildlife Fund - WWF) ၏ စစ်တမ်းကောက်လေ့လာချက်အရ လွန်ခဲ့သော ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုအတွင်း ကမ္ဘာတစ်ဝန်းလုံးတွင် ကျားကောင်ရေ (၁၀၀၀)ကျော် သတ်ဖြတ်ခံခဲ့ရကြောင်းသိရသည်။ တစ်နှစ်လျှင်ပျမ်းမျှ (၁၀၄)ကောင်မှ (၁၁၉)ကောင်နှုန်းဖြင့် ပျောက်ကွယ်နေရသည်။ ကမ္ဘာ့ကျားကောင်ရေစုစုပေါင်း၏ ထက်ဝက်ကျော်သည် အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် ရှိနေပြီး တရုတ်နိုင်ငံသည် ကျားကို ဆေးဖော်ရန်အတွက် အသုံးချသော နိုင်ငံဖြစ်သည်။ တရုတ်အာဏာပိုင်များအနေဖြင့်လည်း နှစ်ပေါင်းထောင်ကျော်မျှ အရိုးစွဲလာခဲ့သော ရိုးရာ အစဉ်အလာဖြစ်နေသည့် အတွက် အဆိုပါ ကိစ္စကို ကိုင်တွယ်ရ ခက်ခဲနေသည်။    
ကြောင်မျိုးရင်းတွေထဲမှ Pantherinae လို့ခေါ်တဲ့ (Big Cat) ကြောင်ကြီးမျိုးများတွင် အင်းကျား(Clouded Leopard)၊ကြောင်စက်ခုန်(Eurasian Lynx)၊ချီတာ ကျားသစ်(Cheetah)၊နှင်းကျားသစ်(Snow Leopard)၊ကျားသစ်(Leopard)တောင်ခြင်္သေ့(Puma)၊ဂျာဂွားကျားသစ်(Jagaur)၊ခြင်္သေ့(Lion)၊ကျား(Tiger)စသည့်တိုပါဝင်ပြီး ကြောင်မျိုးရင်း အားလုံးထဲတွင် ကျားသည်အရွယ်အစားအားဖြင့် အကြီးဆုံးဖြစ်သည်။ ကြောင်မျိုးရင်းထဲတွင် အကြီးဆုံးသတ္တဝါဖြစ်သောကျားတို့သည် ဘင်္ဂလား ၊ မန်ချူးရီးယား၊ စူမတြား ၊ အင်ဒိုချိုင်းနား စသဖြင့် ကျားမျိုးစိတ်ပေါင်းများစွာရှိပြီး ထိုအထဲမှာ ဆိုက်ဘေးရီးယားကျားက အကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ကျားတွေကို အာရှတိုက်တစ်တိုက်လုံးမှာ တွေ့ရလေ့ရှိပါတယ်။ ခြင်္သေ့တွေအာဖရိက ကိုရောက်သွားရခြင်းမှာ ရှေ့ယခင်ကအာရှတွင် ကျားတွေအဆမတန်ပေါလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျားမျိုးစိတ်ထဲမှာ အရှားပါးဆုံးကတော့ ရွှေရောင်ကျားဖြစ်ပါတယ်။ လူသိအများဆုံး ဘင်္ဂလားကျား၏အသွေးအမွေးမှာ အခြားကျားများနှင့် မတူ၊ နီဝါဝါအရောင် ရှိပြီးလျှင် တစ်ကိုယ်လုံးတွင် အနက်ရောင် အစင်းကြီးများဖြင့် လှပစွာရှိနေတတ်ပါတယ်။
လက်ခံ အသိအမှတ်ပြုထားသော ကျား မျိုးစိတ်ခွဲ ၁၁ မျိုးရှိသည်။ ယင်းတို့အနက် နှစ်မျိုးဖြစ်သည့် ထရီနီးနှင့် ဂျပန်ကျားများသည် သမိုင်းမတင်မီ ခေတ်ကတည်းကပင် မျိုးသုဉ်းသွားခဲ့ကြပြီး ဖြစ်သည်။ ကျန်မျိုးစိတ်ခွဲများ အားလုံးသည် အနည်းဆုံး ၂၀ ရာစု အလယ်ပိုင်းအထိ ရှင်ကျန်ခဲ့ကြပြီး ယင်းတို့အနက် သုံးမျိုးကို မျိုးသုဉ်းသွားခဲ့ပြီဟု သတ်မှတ်ခဲ့ကြပြန်သည်။ တောင်အာရှ (အာဖဂန်နစ္စတန်၊ အိန္ဒိယ၊ ပါကစ္စတန်)၊ အရှေ့အာရှ (တရုတ်၊ မွန်ဂိုးလီးယား၊ မြောက်ကိုရီးယား၊ ဆိုက်ဘေးရီးယား၊ တောင်ကိုရီးယား) နှင့် အင်ဒိုနီးရှား ကျွန်း သုံးကျွန်း အပါအဝင် အရှေ့တောင်အာရှ ဒေသများတွင် ကျားများ၏ အဓိက သမိုင်းအစဉ်အလာကြီးသော နယ်မြေများသည် အလွန်အမင်း ကျုံ့လာနေပြီး ပင်လယ်နက် (အီရန်၊ ဂျော်ဂျီယာ၊ တောင်ပိုင်း ရုရှား၊ တူရကီ) နှင့် ဗဟို အာရှ (ကာဇက်စတန်၊ တက္ကမန်နစ္စတန်၊ ဥဇဘက်ကစ္စတန်) ဒေသများတွင် မျိုးသုဉ်းသွားပြီ ဖြစ်သည်။
ယနေ့ခေတ်တိုင် ကျန်ရှိနေသေးသည့် မျိုးစိတ်ခွဲများမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်သည်။
ကျန်ရှိနေသေးသော ကျား မျိုးစိတ်ခွဲများ
ဘင်္ဂလားကျား (P. t. tigris), အိန္ဒိယကျား ဟုလည်း ခေါ်သည် Lives in India, Nepal, Bhutan, and Bangladesh, and is the most common subspecies. In 2011, the total adult population was estimated at 1,520–1,909 in India, 440 in Bangladesh, 155 in Nepal and 75 in Bhutan. In 2014, the population in India was estimated at 2,226, 163–253 in Nepal and 103 in Bhutan as of 2015. It lives in alluvial grasslands, subtropical and tropical rainforests, scrub forests, wet and dry deciduous forests, and mangroves. It is the second-largest of the surviving subspecies. Males attainatotal nose-to-tail length of ၂၇၀ to ၃၁၀ cm (၁၁၀ to ၁၂၀ in) and weigh between ၁၈၀ to ၂၅၈ kg (၃၉၇ to ၅၆၉ lb), while females range from ၂၄၀ to ၂၆၅ cm (၉၄ to ၁၀၄ in) and ၁၀၀ to ၁၆၀ kg (၂၂၀ to ၃၅၀ lb). In northern India and Nepal, the average is larger; males can weigh up to ၂၃၅ ကီလိုဂရမ် (၅၁၈ ပေါင်), while females average ၁၄၀ ကီလိုဂရမ် (၃၁၀ ပေါင်). Coat colour varies from light yellow to reddish yellow with black stripes.
အင်ဒိုချိုင်းနားကျား (P. t. corbetti) ကော်ဘက်ကျား ဟုလည်း ခေါ်သည် Is found in Cambodia, China, Laos, Burma, Thailand, and Vietnam. In 2010 the total population was estimated at about 350 individuals. Their preferred habitat is forests in mountainous or hilly regions. Males average ၁၀၈ လက်မ (၂၇၀ စင်တီမီတာ) in total length and weigh between ၁၅၀–၁၉၅ kg (၃၃၁–၄၃၀ lb), while females average ၉၆ လက်မ (၂၄၀ စင်တီမီတာ) and ၁၀၀–၁၃၀ kg (၂၂၀–၂၉၀ lb).
မလေးကျား (P. t. jacksoni) Exclusively found in the southern part of the Malay Peninsula. The last native wild tiger in Singapore was shot dead in 1930. Was not consideredasubspecies in its own right untila2004 genetic analysis showed that they are distinct in mtDNA and micro-satellite sequences from the Indochinese subspecies. As of 2014 the total population is estimated at fewer than 500 individuals, thoughanew report from September that year estimated it at between 250 and 340 individuals. Males range in total length from ၁၉၀–၂၈၀ cm (၇၅–၁၁၀ in) and weigh between ၄၇.၂ to ၁၂၉.၁ kg (၁၀၄ to ၂၈၅ lb), while females range from ၁၈၀–၂၆၀ cm (၇၁–၁၀၂ in) and ၂၄ to ၈၈ kg (၅၃ to ၁၉၄ lb).
ဆိုက်ဘေးရီးယားကျား (P. t. altaica), အေမာကျား ဟုလည်း ခေါ်သည် Inhabits the Amur-Ussuri region of Primorsky Krai and Khabarovsk Krai in far eastern Siberia, with the exception ofasmall population in Hunchun National Siberian Tiger Nature Reserve in northeastern China, near the border of North Korea. In 2005, there were 331–393 adult and subadult Siberian tigers in the region, withabreeding adult population of about 250 individuals. As of 2015, there an estimated population of 480-540 individuals in the Russian Far East. It is the largest subspecies and ranks among the largest felids ever to have existed. Males haveahead and body length of between ၁၉၀–၂၃၀ cm (၇၅–၉၁ in) and weigh between ၁၈၀ to ၃၀၆ kg (၃၉၇ to ၆၇၅ lb), while females average ၁၆၀–၁၈၀ cm (၆၃–၇၁ in) and ၁၀၀ to ၁၆၇ kg (၂၂၀ to ၃၆၈ lb). Tail length is about ၆၀–၁၁၀ cm (၂၄–၄၃ in). Compared to other subspecies, Siberian tigers have thicker coats, paler hues, and fewer stripes in dark brown instead of black.
တောင်တရုတ်ကျား (P. t. amoyensis) အမွိုင် သို့မဟုတ် ရှမင်ကျား ဟုလည်း ခေါ်သည် Is the most critically endangered subspecies of tiger, and one of the 10 most endangered animals in the world. Despite unconfirmed reports and some evidence of footprints, there has been no confirmed wild sighting in over 25 years, leading experts to consider it "functionally extinct", with the entire known population of roughly 65+ individuals held in captivity. It is the second-smallest subspecies. Males range in total length from ၂၃၀–၂၆၀ cm (၉၁–၁၀၂ in) and weigh between ၁၃၀ to ၁၈၀ kg (၂၉၀ to ၄၀၀ lb), while females range from ၂၂၀–၂၄၀ cm (၈၇–၉၄ in) and ၁၀၀ to ၁၁၀ kg (၂၂၀ to ၂၄၀ lb). The South China tiger is considered to be the most ancient of the tiger subspecies and is distinguished byaparticularly narrow skull, long muzzle nose, rhombus-like stripes and vivid orange colour.
ဆူမားတြားကျား (P. t. sumatrae) Found only on the island of Sumatra, and is thus the last surviving of the three Indonesian island subspecies. Listed asadistinct subspecies as of 1998, when genetic testing revealed the presence of unique genetic markers, and is critically endangered. As of 2014 the wild population is estimated at between 400 and 500, seen chiefly in the island's national parks. It is the smallest of all living tigers. Males range in total length from ၂၂၀ to ၂၅၅ cm (၈၇ to ၁၀၀ in) and weigh between ၁၀၀ to ၁၄၀ kg (၂၂၀ to ၃၁၀ lb), while females range between ၂၁၅ to ၂၃၀ cm (၈၅ to ၉၁ in) and ၇၅ to ၁၁၀ kg (၁၆၅ to ၂၄၃ lb). Their reduced size is an adaptation to the thick, dense forests and smaller prey in their native habitat. This subspecies also has the darkest coat, with more narrowly spaced stripes andalonger mane and beard.
မျိုးသုဉ်းသွားပြီး ဖြစ်သော ကျား မျိုးစိတ်ခွဲများ
ဘာလီကျား (P. t. balica) Was limited to the Indonesian island of Bali. Hadaweight of ၉၀–၁၀၀ kg (၂၀၀–၂၂၀ lb) in males and ၆၅–၈၀ kg (၁၄၃–၁၇၆ lb) in females. Bali tigers were hunted to extinction; the last Bali tiger, an adult female, is thought to have been killed at Sumbar Kima, West Bali, on 27 September 1937, though there were unconfirmed reports that villagers foundatiger corpse in 1963. The Bali tiger is reported to have had some spots in between its stripes.
ကက်စပီယန်ကျား (P. t. virgata), ဟိုက်ကေးနီးယန်းကျား သို့မဟုတ် တူရန်ကျား ဟုလည်း ခေါ်သည် Was found in the sparse forest habitats and riverine corridors south and east of the Black and Caspian Seas, through the Pontic-Caspian steppe into Central Asia, and onto the Takla-Makan desert of Xinjiang. The Caspian tiger had been recorded in the wild until the early 1970s. The Siberian tiger is the genetically closest living relative of the subspecies.
ဂျာဗားကျား (P. t. sondaica) Was limited to the island of Java, and had been recorded until the mid-1970s. Javan tigers were larger than Bali tigers; males weighed ၁၀၀–၁၄၁ kg (၂၂၀–၃၁၁ lb) and females ၇၅–၁၁၅ kg (၁၆၅–၂၅၄ lb). After 1979, no more sightings were confirmed in the region of Mount Betiri. An expedition to Mount Halimun Salak National Park in 1990 did not yield any definite, direct evidence for the continued existence of tigers.
နောက်ထပ် အချက်အလက်များ။ Panthera hybrid၊ Liger၊ နှင့် Tigon
↑ Panthera tigris tigris။ IUCN Red List of Threatened Species. Version 2011.2။ International Union for Conservation of Nature (2011)။
↑ ကိုးကား အမှား - Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named Burke
↑ "Bhutan’s tigers"၊ World Wide Fund For Nature (WWF)။ 29 November 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 2016-03-04။
↑ ၉.၀ ၉.၁ ၉.၂ ၉.၃ ကိုးကား အမှား - Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named Mazak1981
↑ Bengal tigers have Smith, James L. David (1983). "A technique for capturing and immobilizing tigers". The Journal of Wildlife Management 47 (1): 255–259. doi:10.2307/3808080. Table 1 entries on page 257 are Adult females N=19 mean=140 Range=116–164, Adult males N=7 mean=235 Range=200–261.
↑ ၁၂.၀ ၁၂.၁ Brakefield, Tom (1993)။ Big Cats: Kingdom of Might။ Voyageur Press။ p. 44။ ISBN 978-0-89658-329-0။
↑ Species: Indochinese tiger။ World Wildlife Fund။ 10 April 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၁၄.၀ ၁၄.၁ ၁၄.၂ ၁၄.၃ ၁၄.၄ ၁၄.၅ Tiger Facts။ Save China's Tigers။ 2014-08-29 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 10 April 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၁၅.၀ ၁၅.၁ Lion City, Tiger Land: Singapore’s Native Cat on the Brink of Extinction.။ latitudes.nu။ 31 May 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Luo, S.-J. (2004). "Phylogeography and genetic ancestry of tigers (Panthera tigris)". PLoS Biology2(12): e442. doi:10.1371/journal.pbio.0020442. PMID 15583716.
↑ Species: Malayan tiger။ World Wildlife Fund။ 10 April 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Hance၊ Jeremy (September 2014)။ Malayan tiger population plunges to just 250-340 individuals။ 17 July 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Khan, M.K.M. (1986). "Tigers in Malaysia". Journal of Wildlife and Parks V: 1–23.
↑ Kerley, L.L. (2003). "Reproductive parameters of wild female Amur (Siberian) tigers (Panthera tigris altaica)". Journal of Mammalogy 84: 288–298. doi:10.1644/1545-1542(2003)084<0288:RPOWFA>2.0.CO;2.
↑ Kaiman, Jonathan (24 May 2013)။ China reports rise in humans encountering wild Siberian tigers။ The Guardian။ 10 April 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Panthera tigris ssp. altaica။ IUCN Red List of Threatened Species. Version 2011.2။ International Union for Conservation of Nature (2011)။
↑ Species: Amur tiger။ World Wildlife Fund။ 10 April 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Russia Announce Tiger Census Results!။ World Wide Fund for Nature (27 May 2015)။7June 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၂၅.၀ ၂၅.၁ Hammond, Paul (2010)။ The Atlas of Endangered Animals: Wildlife Under Threat Around the World။ Marshall Cavendish။ p. 86။ ISBN 978-0-7614-7872-0။
↑ South China tiger believed to still exist in wild။ China.org.cn။ Xinhua News Agency (15 July 2007)။3April 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Species: South China tiger။ World Wide Fund for Nature။ 10 April 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Panthera tigris ssp. sumatrae (Sumatran Tiger)။ IUCN Red List of Threatened Species. Version 2011.1။ International Union for Conservation of Nature (2008)။
↑ Species: Sumatran tiger။ World Wildlife Fund။ 10 April 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Sorting out tigers (Panthera tigris): mitochondrial sequences, nuclear inserts, systematics, and conservation genetics" (1998). Animal Conservation 1 (2): 139–150. doi:10.1111/j.1469-1795.1998.tb00021.x.
↑ ကိုးကား အမှား - Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named der-tiger
↑ Whitten၊ Tony; Soeriaatmadja၊ Roehayat Emon (1996)။ Ecology of Java & Bali။ Oxford University Press။ p. 706။ ISBN 978-962-593-072-5။
↑ ကိုးကား အမှား - Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named ReferenceA
↑ Panthera tigris ssp. virgata။ IUCN Red List of Threatened Species. Version 2011.2။ International Union for Conservation of Nature (2008)။
↑ "Mitochondrial Phylogeography Illuminates the Origin of the Extinct Caspian Tiger and Its Relationship to the Amur Tiger" (2009). PLoS ONE4(1): e4125. doi:10.1371/journal.pone.0004125. PMID 19142238.
↑ Panthera tigris ssp. sondaica။ IUCN Red List of Threatened Species. Version 2011.2။ International Union for Conservation of Nature (2008)။
↑ Mazák, J.H. (2006). "A taxonomic revision of the tigers (Panthera tigris)". Mammalian Biology 71 (5): 268–287. doi:10.1016/j.mambio.2006.02.007. Archived6September 2007 at the Wayback Machine.
↑ "Untersuchung über die Carnivoren des Gunung Halimun Naturschutzgebietes." (1991). Zoologische Gesellschaft für Arten- und Populationsschutz e.V. Mitteilungen7(2): 3–5.
↑ "Planning tiger recovery: Understanding intraspecific variation for effective conservation" (2015). Science Advances 11 (5: e1400175): e1400175. Science Advances. doi:10.1126/sciadv.1400175.
↑ Controversial study claims there are only two types of tiger။ American Association for the Advancement of Science (2015)။ DOI:10.1126/science.aac6905။
↑ ၄၂.၀ ၄၂.၁ Guggisberg၊ C. A. W. (2001)။ Wild Cats of the World။ New Library Press။ ISBN 978-0-7950-0128-4။
↑ ၄၃.၀ ၄၃.၁ Markel၊ Scott; León, Darryl (2003)။ Sequence Analysis inaNutshell:aguide to common tools and databases။ Sebastopol, California: O'Reily။ ISBN 0-596-00494-X။
↑ tigon – Encyclopædia Britannica Article။ 12 September 2007 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ကျား&oldid=672726" မှ ရယူရန်
၂၁ ဩဂုတ် ၂၀၂၁၊ ၀၈:၄၇ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၂၁ ဩဂုတ် ၂၀၂၁၊ ၀၈:၄၇ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။